I-Wholesale 6x12m Heavy Duty PVC Wedding Party Itende NgeTende Lokubuyiselwa Umlilo neGreenhouse | I-Winsom
Ukugoqa itafula nesihlalo
I-bamboo mat ye-Sukkah
Ibhodwe elisebenziseka kabusha futhi elihlala njalo ...
Itende Lokugoqa I-premium
I-40mm Leg Iphrofayili Yesisindo Esikhulu ...
Umhubhe Wepulasitiki Omhlophe we-Gre ...
I-6x12m Heavy Duty PVC Wedding Party Itende Nge-Fire retardant
4-19 Izikhwanyana Izingcezu ezingama-20-49 > = 50Iziqeshana
$ 549.00 $ 539,00 $ 529,00
Leli tende lephathi lilungele noma yimiphi imicimbi yangaphandle, efana nemibukiso, imishado, amaphathi, izoso. Ungayifaka futhi egcekeni lakho elingangemuva elikhulu elithandekayo ukuze uphathise umndeni wakho kanye nezivakashi.
1) Isembozo esingaphezulu esibuyisela umlilo nezindonga ezihlangana neFlame Retardant Standard M2
2) Ikhwalithi ephezulu, uhlaka lomsebenzi osindayo, enezixhumi ezihlala isikhathi eside nesisekelo sensimbi
I-3) Isembozo esiphezulu se-PVC esinamamitha okushisa okugcotshwe ngomthofu, 100pp mano
I gama le-brand I-Winsom
Inombolo Model WS-P2612
I-FOB Port IShanghai, uNgobo
Igama lento I-6x12m Heavy Duty PVC Wedding Party Itende ne-Fire retardant
Usayizi Womkhiqizo I-20x40ft (6x12m)
Umbhalo ongaphezulu I-500gsm Fire retardant PVC
Izinto zokubhala I-380gsm Fire retardant PVC
Uhlaka lwe-spec. Dia 42 * 1.2 / 38 * 1.0mm amashubhu wensimbi egqinsiwe
Ukupakisha Amabhokisi Ukupakisha ibhokisi eliqinile
Isisindo 266 KG
MOQ Izingcezu ezi-4
20x40ft (6x12m) Umdwebo Wobuchwepheshe
Itende lethu lephathi ngomlamo oqondile womlenze nophahla lwesitayela sasesontweni lesithathu linikeza umuzwa ovulekile wemisebenzi eminingi yangaphandle. Kuhle Imishado, imicimbi yenkampani, amaqembu angaphandle nokuningi!
Sisebenzisa amashubhu aphezulu wegreyidi eliphezulu angavimba amashubhu kusuka ekugqwabeni nasekugqwala.Ukuxhaswa kwesisekelo segumbi kwakha ukwakheka okungafani nxantathu, okwenza uhlaka lwophahla oluphezulu luzinze kakhudlwana & Firm; futhi imigoqo engaphezulu yomhlaba yenza itende ukuthi ibe nokuqina futhi imelana nomoya ngaphezulu emhlabathini.
I-Luxury eklanyelwe i-PVC ephezulu nezindonga ezisemaceleni ingahlangana neFlame Retardant Standard M2. I-100% engangenisi manzi, ukuvikelwa kwe-UV ukuhlinzeka umoya omuhle womcimbi wakho. Futhi, ifaka ukungena okususwayo, ukungena kwe-zippered namawindi ayi-12 PVC ukuvumela umoya omningi nokukhanya ngaphakathi.
Esiqongweni setende lephathi, sisebenzisa imigoqo eyenziwe yaqiniswa ukuze kugwemeke ukuwohloka kwendwangu esindayo yePVC ebangelwa ukugcwala kwemvula. Futhi, isakhiwo esithuthukisiwe singavikela kangcono itende emoyeni futhi sithuthukise ukuqina nokuphepha kwalo.
Izigxobo Ezithuthukisiwe, Uhlaka Lokumelana Nokugqwala: uhlaka lwensimbi ephezulu nekhwalithi yensimbi ehlanganisiwe yenza i-canopy yethu ihlale isikhathi eside.
Izindonga ezisemaceleni kanye nomnyango zingahanjiswa kalula. Kunamabhola agxuma ezixhumanisini zokungeza ukuqina kohlaka, uphahla nezindonga eziseceleni zixhumene nohlaka ngamabhola amhlophe we-bungee.
Esedlule: Eshibhile I-3 × 3 Tende Ngaphandle
Olandelayo: I-10x20Ft (3x6M) Itende Elikhulu Lama-Puty Party
Itende Lephathi Yesabelomali
Itende Leqembu Eshibhile
Itende lephathi langaphandle
Itende Lephathi Lomshado
Uyacelwa ukuthi ukweluleke ukuthi ungakanani nokuthi ufuna malini, futhi yiliphi itheku ezweni lakho eliseduze kwakho, lapho-ke ngizokwenza intengo esemthethweni ye-CIF kwisethenjwa sakho.
Eshibhile I-3 × 3 Tende Ngaphandle
I-10x20Ft (3x6M) Itende Elikhulu Lama-Puty Party
Ibhajethi ye-5x10m PE Izinkundla zemicimbi
Amatende Amandla Wangaphandle Wemicimbi Yomshado we-5x8m
Ukuthengisa Okusheshayo Ithente lephathi yePhathi 13x20ft (4x6m)
Amatende Angaphandle Okuthengiswa Okushisayo Kwimicimbi Yephathi
Itende Langaphandle le-PVC lephathi 4x4m
UKUXHUMANA MAHHALA 0086-15358204830
I-ADDRESS No.1 Tianyuan Rd, iMishini Yezindawo Zezimboni, Idolobha LaseDongtai, Isifundazwe sase Jiangsu, PRChina